အဖိနှိပ်ခံတို့ အသံ: May 2014
လွင်မင်းဗိုလ်(နည်းပညာ): Making Blog By Saturngod (ဘလော့တခုဖန်တီးခြင်း): Blogger တွေအတွက် ဒီစာအုပ်လေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..။ ဒီစာအုပ်လေးနဲ့ ဘလော့တခု တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်..။ ဆိုဒ်တော်တော်များများမှာ တင်ထားပြ...
Posted by Wai Lin Aung at 6:18 PM
This Message will always be with me, till I die. I promise with my spirit and mind, that Sayargyee, U Win Tin, your words will not be in vain. WE will continue the STRUGGLE, Sayar' koe kandaw Hlyet. A Lay ni Pyu by thee.
Ee bawa Ee Mhyar' thar.
Myo Nyunt, Perth, Western Australia
နေရစ်ဦးတော့ အမိ မြန်မာနိုင်ငံ၊ နူတ်မဆက်ပဲ ထွက်ခွာခဲ့သူမို့ အပြစ်တော် မတင်နဲ့လို့သာ တောင်းပန်းရင် နူတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ မနိုင်ဝန် တွေထမ်းရင် ခန္တာ ပျက်ပြုန်း ကြွေလွင့်ခဲ့ရပေမဲ့ နှလုံးသားကတော့ မပျက်သေးပါလေ။တော်လှန်နေဆဲပါ ၊ တိုက်ခိုက်နေဆဲပါ၊ ဆန့်ကျင်နေဆဲပါ။
ဘယ်လိုပင် ဖျက်ဆီး ပါစေ မပျက်ဆီးသေးပါလေ ။ သည်ဘ၀ သည်ခန္တာနဲ့ ဆက်လက် တိုက်ပွဲ ၀င်ခွင့် မရနိုင်တော့ပေမဲ့ နောက်ဘ၀ နောက်ခ န္တာနဲ့ ဆက်လက် တိုက်ပွဲ ၀င် ဖို့ အသင့်ပါပဲ ချစ်တဲ့ အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်။
ပြည်သူလူထုအတွက် ဆက်လက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ချင်ပါတယ်။ သည်ဘ၀ကတော့ သည်မျှ ဖြင့်သာ ကျေနပ်တော်မူကြပါ။
ကျုပ်တို့တစ်တွေ လူထူ အကျိုးကို ထမ်းရွက်ချင်ကြသလား၊ စစ်အာဏာရှင်ကို ဘီးလူမွှေး နုတ်ချင်ကြသလား၊ ပြည်သူ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ဖော်ထုတ်ချင်ကြသလား၊ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးတွေဖန်တီးချင်ကြသလား၊
တစ်အုံလုံး၊ တစ်ပြုံ လုံး၊ တစ်ဘုံလုံး၊ ခြေစုံပစ် ပါဝင်ဆင်နွှဲကြစို့၊ အားမွေးထားကြစို့၊ ဓားသွေးထားကြစို့။
လက်ပြန်ကြိုးအမျိုးမျိုးချည် ၊ ပါချပ်ကြိုးအလီလီဆင်တဲ့ ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ကြစို့။
Cut and Pasted From KO Aung Heins FB through Yebaw Gyee 's Ko Myint Shwe posting.
Posted by Wai Lin Aung at 4:55 PM
Micro Turst Finance သို့မ ဟုတ် သင်းဖွဲ့ ပြု ခြင်း
" Micro Trust Finance (MTF) "
အသင်းအဖွဲ့ များတည်ထောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် သွယ် ၀ိုက် အကျိုး စီးပွားရနိုင်ခွင့်ကို
ရရှိတတ်လေသည်။ သိုးဆောင်း စကားအရ Institutionalization ဟုခေါ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ တိုက်ရိုက်အကျိုး ထက် မမြင်နိုင်သော အကျိုးစီးပွားရလာဒ် က ပို နိုင်လေသည်။
စေတနာဟူသည် တူသောအကျိုး ကိုပေးတတ်၏ ဆိုသော မြန်မာစကား သည် အထင်အရှားရှိ၏ ။ ထိုစေတနာကို ညဏ်ဖြင့်ယှဉ်တွဲ ၍ ကား ဆောင်ရွက်နိုင်သူ ရှားလှပေသည်။
မပြီးခင်- ဗမာမမြင်စေနဲ့ ဆိုသောစကားရှိလေသည်။ ယခုတွင်မူ သုတေသနပြုလုပ်ဆောင်ချက်သည် ကျေနပ်လောက်ဖွယ် ဖြစ်သည့်အတွက် အများသိအောင် တင်ပြပါမည်။ တင်ပြ မည့်အကြောင်းမှာ Micro Trust Finance ဟုခေါ်သည့် လုပ်ငန်းငယ်ကလေး အကြောင်းပင်ဖြစ်ပါသည် ။ Micro Trust Finance ဆိုသည်မှာ မိမိသဘောကျပေးထားသော နာမည်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းငန်ဆိုသော်ငြားလည်း လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်လာအောင် ထောက်ပံပေးနိုင်သည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုပင် ဖြစ်ပါချေသည်။
လုပ်ငန်းငယ်လေးများကို အတိုးနှုန်းနည်းပါးစွာဖြင့် ချေးငွေထုတ်ပေးသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုကို စမ်းသပ်ဆောင်ရွက် ရန် ကျွန်တော် တို့သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကတည်းက သုတေသနတစ်ရပ်ကိုပြု လုပ် ခဲ့ပါသည်။ ယူသည့်အတိုးမှာ ၁.၅ % တိုးဖြစ်သည်။
ဆောင်ရွက်သူများ၏ အခြေခံစိတ်ဓါတ်မှာ လုပ်ငန်းငယ်ကလေးများ အရင်းအနှီးကို လွယ်လွယ်ကူကူ ရရှိနိုင်ရန်ဖြစ်လေသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကတည်းက စီးပွားရေးငယ်ကလေးများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဖြစ်လေသည်။
အရင်းအနှီးလိုသည့် လုပ်ငန်းငယ်လေးများ အတွက် အရင်းအနှီးထုတ်ပေးလိုခြင်းကြောင့် နိုင်ငံရေးအသိစိတ်၊ လူမှုရေးအသိ စိတ်ပေါင်းစပ်အခြေခံပြီး သူတစ်ပါးပြေလည်စေဖို့အရင်းခံခဲ့သည်။
ကနဦးစတင်ငွေ လူဆယ်ဦး၊ မတည်ငွေ ကျပ်သိန်း ၅၀ ၊ ယခု-အဖွဲ့ဝင် ၅၀ ကျော်၊ ချေးပေးနိုင်သောငွေ- ကျပ်သိန်း ၂၇၀ ထိဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်မပြောပြတော့ပါ။
သို့သော် grass root ခေါ်သည့် အောက်ခြေလူတန်းစားများအထိ မချေးနိုင်သေး၊ bottom of middle class(အလယ်အလတ်ထဲမှ အောက်ဆုံးဆင့်လောက်) ကို သာချေးနိုင်သည်။
သုတေသနအသေးစိတ်ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတထံသို့ပေးပို့ပြီး၊ လူတွေ့ဆွေးနွေးရန် အစီအစဉ်ရှိပါသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံမှ နိုဗယ်ဆုရှင်၊ ဒေါက်တာယူနွတ်( ဂယာမင်းဘဏ် တည်ထောင်သူ)၏ လုပ်ငန်းနည်းစဉ်ထက် ပိုမိုသက်သာသော ချေးငွေဖြင့် လက်လုပ်လက်စား၊ အရင်းအနှီးလိုအပ်သူများကို ချေးနိုင်မည့် နည်းလမ်းကို အောင်မြင်ထားပြီဖြစ်သည်၊ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ အကူအညီလိုသောကြောင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် တွေ့ခွင့်ရရန်ကြိုးစားပါဦးမည်။
ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်း၏ အနှစ်ချုပ်မှာ ငွေရင်းပြီး ငွေဘယ်လောက်အမြတ်ကျန်မည်ဆိုတာကို ပဓာနမပြု၊ အတိုးနှုန်းအလွန်သက်သာစွာဖြင့် ငွေချေးပေးပြီး၊ ချေးယူသူများထံမှ ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပြန်လည်ရယူခြင်း၊ ရိုးဖြောင့်သောစိတ်ထားများရှိအောင် ထူထောင်ပေးခြင်း (လူကိုကုန်သွယ်ခြင်း)လုပ်ရန်သာဖြစ်ပါသည်။
မကြာမီ အတိုးနှုန်း ၁ % နှုန်းထိချထား သတ်မှတ်မည့်အြ ပင်၊ နောင်တွင် ၀.၅ % ထိချရန် အစီအစဉ်နှင့်လက်တွေလုပ်ငန်းကို စဉ်းစားထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
စီးပွားရေးစိတ်အခြေခံသည့် လုပ်ငန်းများနှင့်တော့ ပွတ်တိုက်မှုရှိလာမည်တော့ ဖြစ်သည်)
( နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနှင့် ဦးစွာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးလိုပါသည်)
ဝေလင်းအောင် ။ ဖုန်း- ၀၉ ၄၃၀ ၉၃ ၅၉၁
ညိုမင်းလွင် ။ ဖုန်း - ၀၉ ၄၂၁၁ ၃၉ ၅၅၈
Posted by Wai Lin Aung at 4:39 PM
Myanmarebook
မတရားအနိုင်ကျင့်နေပါတယ် ။ ကူညီပေးပါ
သို့ ဦးသိန်းစိန် နိုင်ငံတော် သမ္မတ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး နေပြည်တော် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဥ...
၀န်ကြီးဌာနများ ၊ မြန်မာ သတင်ဌာနများ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး
http://www.president-office.gov.mm/ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး ၀က်ဆိုက် http://www.ministryofinformation.gov.mm/index.php ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ...
ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၂၂) မာမာအေး မေ ၁၃ ၊ ၂၀၁၂ “— မြမန်းဂီရိသေလာတောင်၊ နန်းတည်ထောင် ဘုန်းရောင် နေညိုလင်း၊ နောင်ညီကို၊...
အင်္ဂလိပ် သဒ္ဒါ ( Grammar ) သုံးစွဲပုံ ==================== Past continuous tense အသုံးပုံစံကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် အတိတ်ကာလမှာဖြစ်စဲ အခြေနေမှ...
အဖေ့ ကို ဘယ်လို ပြောရမယ် ။ အဖေ့ ကို ဘယ်လိုပြောရမယ်။
ဖုန်းငွေဖြည့် ကဒ် ပြန်မဖြည့်မိလို့ လိုင်းပိတ်ခြင်းခံရပါတယ်။ ကျနော့်အဖေကိုင်တဲ့ဖုန်းပါ။ မင်းကတော့ ၅၀၀၀၀၀ တန်ဖုန်း ကို ကိုင်ပြီး အခု ဖုန...
မြန်မာ့ခရိုနီ အဓိပ္ပါယ် အားဆောင်းပါရှင် ကိုဧည့်သည် မှ သုံးသပ်ခံစားခြင်း
မြန်မာ့ခရိုနီ အဓိပ္ပါယ် အားဆောင်းပါရှင် ကိုဧည့်သည် မှ သုံးသပ်ခံစားခြင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်သော ဒေါက်တာဦးခင်ရွှေသည် (Crony)ဟူသော...
Money make everything.
လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်
ရွာမ-တောင်ကုတ်လမ်းခွဲအတွက် ငွေကြေးအလွဲသုံးစားပြုလုပ်မှုကြောင့် ဒေသခံများ မကျေမနပ်ဖြစ်
အောင်ဟိန်းမင်း . Picture Window theme. Powered by Blogger.